Ubiquiti Archives - Frontiir | Frontiir - Benefiting you with world class ICT
Ubiquiti AP Access Points
Ubiquiti AP (for Indoor)
မော်ဒယ်နံပါတ်	 AP Standard AP LR
Extra Coverage AP Pro
Interference-free AP AC
5GHz - - 300
အကွာအဝေး 122 m
(400 ft) 183 m
(600 ft) 122 m
(400 ft) 122 m
(802.11) b/g/n b/g/n a/b/g/n a/b/g/n/ac
Gigabit Ethernet - -
နေရာများ စားသောက်ဆိုင်များ ၊
နှင့် စသဖြင့် Residences
Ubiquiti AP (for Outdoor)
High Density Outdoor 5G
Interference-free AC Outdoor
Mbps - 450
5GHz - 300
(600 ft) 183m
(802.11) b/g/n a/n a/b/g/n/ac
နေရာများ အားကစားကွင်းများ လုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းများ
Access Points for Home-use
မော်ဒယ်နံပါတ်	 Air Router AirRouter HP Air Gateway
5GHz - - -
အကွာအဝေး 100+ m 200+ m 100+ m
(802.11) b/g/n b/g/n b/g/n
Gigabit Ethernet 1 10/100
Ethernet 1 10/100
နေရာများ အိမ်သုံးသီးသန့် အိမ်သုံးသီးသန့် အိမ်သုံးသီးသန့်
မော်ဒယ်နံပါတ်	 Rocket M Rocket M Ti Bullet M Bullet M Ti
Frequency 900 MHz, 2.4 GHz
3 GHz,5GHz 2.4 GHz
အကျယ်အ၀န်း 50+ km 50+ km 50+ km 50+ km
Throughput 150+ Mbps 150+ Mbps 100+ Mbps 100+ Mbps
Antenna Gain Antenna
မော်ဒယ်နံပါတ်	 Power Bridge M NanoStation
Loco M NanoStation M NanoBridge M
10 GHz 900 MHz
3 GHz 900 MHz
2.4 GHz3GHz5GHz
အကျယ်အ၀န်း 20+ km 15+ km 15+ km 20+ km
33-34 dBi 8 dBi
13 dBi 11 dBi
16 dBi 11 dBi, 18 dBi
12 dBi, 22 dBi, 25 dBi
မော်ဒယ်နံပါတ်	 Nano Bean M AirGrid M PicoStation M
5 GHz5GHz 2.4 GHz
အကျယ်အ၀န်း 25+ km
25+ km 30+ km Indoor 200M
Throughput 150+ Mbps 100+ Mbps 100+ Mbps
Antenna Gain 18dBi, 16dBi
19dBi, 22dBi, 25dBi
16 dBi, 20 dBi
23 dBi, 27 dBi5dBi
မော်ဒယ်နံပါတ်	 Omni: AMO-2G10
Omni: AMO-5G10 Omni: AMO-2G13 Omni: AMO-5G13 Omni: AMO-3G12
Omni Omni Omni Omni
Antenna Gain 10 10 13 13 12
(GHz) 2.3-2.7 5.1-5.8 2.3-2.7 5.1-5.8 3.3-3.8
မော်ဒယ်နံပါတ်	 Sector: 5G-20-90 Sector: 5G-19-120 Sector: 5G-17-90 Sector: 5G-16-120 Sector: 2G-16-90 Sector: 2G-15-120
လမ်းကြောင်း 90° Sector 120° Sector 90° Sector 120° Sector 90° Sector 120° Sector
Antenna Gain 20 19 17 16 16 15
(GHz) 5.1-5.8 5.1-5.8 5.1-5.8 5.1-5.8 2.3-2.7 2.3-2.7
မော်ဒယ်နံပါတ်	 Ti Sector: AM-V2G-TI
Ti Sector: AM-V2G-TI
လမ်းကြောင်း 60°-120° Sector 60°-120° Sector
Antenna Gain 17-15 2.3-2.7
(GHz) 2.3-2.7 5.1-5.8
မော်ဒယ်နံပါတ်	 Rocket Dish: RD-2G-24 Rocket Dish: RD-3G-26 Rocket Dish: RD-5G-30 Rocket Dish: RD-5G-34
လမ်းကြောင်း 6° Beam 7° Beam 5° Beam 3° Beam
Antenna Gain 24 26 30 34
(GHz) 2.3-2.7 3.3-3.8 5.1-5.8 5.1-5.8
Ubiquiti Switches, Edge Routers & Cables
No. of Ports5835
No. of Gigabit Ports5835
No. of poE Ports5(only 24V) 8 (24/48 V)05 (24/48 V)
Special Features VLAN Support
Adapter-free PoE Support Routing: OSPF, BGP
Services: DHCP Server, DNS
Forwarding, VRRP, Web Caching,
Equivalent to Category 5E Category 5E
Durability Outdoor-ready Extreme-Outdoor
မော်ဒယ်နံပါတ်	 ES-24-250W ES-24-500W ES-48-500W ES-48-750W
Frequency 24 24 48 48
SFP ပေါက်2222
Throughput 26 26 70 70
စွမ်းအင်သုံးဆွဲမှု (W) 250 500 500 750
SFP ပေါက် - -22
ဗို့အား 20-27V 20-27V 20-27V 20-27V
မော်ဒယ်နံပါတ်	 UniFi Video
Camera IR UniFi Video
Camera Dome IR UniFi Video
Resolution 720p HD 720p HD 1080p Full HD
FrameRate 30 FPS 30 FPS 30 FPS
Sensor Progressive Scan
RGB 1/4" CMOS
Image sensor 1/3" Wide Dynamic
Range (WDR) Sensor
Power Supply 1/3" Wide Dynamic
Range (WDR) Sensor 1/3" Wide Dynamic
မှန်ဘီလူး 3.6 mm/F1.8 1.96 mm/F2.0 3xOptical Zoom,
Processor ARM 1136J-S, 528 MHz ARM 1136J-S, 528 MHz ARM 1136J-S, 528 MHz
Memory 256 MB DDR3 256 MB DDR3 256 MB DDR3,
View Angle 56.14 degree(H)
64.33degree(D) 88.8 degree(H)
98.2 degree(D) 44.4 W - 15.7 T (V)
81.0 W - 27.9 T (H)
94.0 W - 32.1 T (D)
Ubiquiti အမှတ်တံဆိပ် AP Standard Access Point သည် Frequency Rate 2.4 GHz- 300 Mbps (mega bit par second) ထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော အကွာအဝေး Length အနေနဲ့ကတော့ 122m (400 ft ) အထိ ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ခန့် မှန်း (၇၀) ယောက် ကျော်အထိ Connection ကောင်းကောင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Ubiquiti (AP Standard) Access point သည် Wifi အနေဖြင့် b/g/n (၃)မျိုးအထိ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ceiling type ဖြစ်သည့်အတွက် လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဈေးဝယ် ကုန်တိုက်ကြီးများနှင့် ခန်းမများကို decoration အပြင်အဆင် မထိခိုက်စေဘဲ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အခန်းဖွဲ့စည်းမှု ရှိသော်လည်း အကာအကွယ် မရှိသော ဈေးဝယ် ကုန်တိုက်ကြီးများ၊ ခန်းမများ၊ စားသောက်ဆိုင်များကဲ့သို့သော အဆောက်အဦးအတွင်း နေရာများတွင် တပ်ဆင် အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
AP Standard Access Point အတွက် Software ကို www.ubnt.com တွင် အခမဲ့ download ဆွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
AP LR extra coverage
အခန်းဖွဲ့စည်းမှုများသော ဟိုတယ်ကြီးများ၊ လူနေတိုက်များနှင့် အခြား ကျယ်ဝန်းကြီးမားသော အဆောက်အဦးအတွင်းပိုင်း နေရာများအတွက် Ubiquiti အမျိုးအစား AP LR (extra coverage) Access Point သည် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ Frequency rate 2.4 GHz -300 Mbps, Wifi (802.11) - b/g/n ဖြစ်ပြီး အကွာအဝေး Length အနေနဲ့က 183m( 600ft ) အထိ ဖမ်းယူ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ AP LR (extra coverage) သည် ceiling type ဖြစ်ပြီး ပါးလွှာမှု ရှိသည့်အတွက် နေရာမယူသည့်အပြင် အလွယ်တကူ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
AP LR extra coverage အတွက် Software ကို www.ubnt.com တွင် အခမဲ့ download ဆွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
AP Pro (Interference-free)
Ubiquiti AP Pro သည် dual band အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်. Dual Band ဆိုသည်မှာ frequency rate 2.4 GHz - 450 Mbps ၊ 5GHz - 300 Mbps နှင့် speed rate က အလုပ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Dual band ၏ အားသာချက်မှာ လိုင်းနှစ်လိုင်းကို တပြိုင်တည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး တစ်လိုင်းပြတ်တောက်သွားပါက တစ်လိုင်းအစားထိုး အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အကွာအဝေးအားဖြင့် 122m (400ft) အထိ အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး wifi(802.11) - a/b/g/n များကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ AP Pro အမျိုးအစားကို စားသောက်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းများ၊ ရုံးများနှင့် အခြားသော အဆောက်အဦးအတွင်းပိုင်း နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ AP Pro အမျိုးအစားသည် Secondary Gigabit Ethernet အပေါက် ပါဝင်ပြီး ရှေ့မျက်နှာပြင်ကို LED blue ring ဖြင့် အလှဆင်ထားသော ceiling type အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
AP Pro ( Interference-free ) အတွက် Software ကို www.ubnt.com တွင် အခမဲ့ download ဆွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
AP Pro (Interference-free Extra speed)
AP Pro (Interference-free Extra speed) သည် Dual band အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး frequency rate 2.4 GHz - 450 Mpbs , 5GHz - 1300 Mbps ဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ အကွာအဝေး 122m(400ft) အထိ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး AP Pro သည် wifi (802.11) – a/b/g/n/ac (5)မျိုး အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ AP Pro (Interference-free Extra speed) သည် Secondary Gigabit Ethernet port အပေါက် ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အပြင်ပန်းပုံစံ အနေဖြင့် လေးထောင့်စက်စက် ထုတ်လုပ်ထားပြီး အရှေ့ဘက်တွင် LED Ring ဖြင့် အလှဆင်ထားပါသည်။ Ubiquiti AP Pro (Interference-free Extra speed) အမျိုးအစားကို လုပ်ငန်းသုံးအဖြစ် အဆောက်အဦးအတွင်းပိုင်းသုံး သီးသန့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
AP Pro (Interference-free Extra speed) အတွက် Software ကို www.ubnt.com တွင် အခမဲ့ download ဆွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Outdoor+ (High Density)
ကျယ်ဝန်းသော အားကစားကွင်းများကဲ့သို့ အကာအကွယ်မရှိသော အဆောက်အဦးအပြင်ပိုင်း နေရာများတွင် wifi တပ်ဆင်အသုံးပြုမည် ဆိုလျှင် Ubiquiti အမှတ်တံဆိပ် Outdoor+ (High Density) အမျိုးအစားသည် အကောင်းဆုံး Wifi Access Point ဖြစ်ပါသည်။ Frequency rate 2.4 GHz - 300 Mbpts နှင့် အလုပ်လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သည့် အကွာအဝေး မှာ 183 m( 600 ft ) ဖြစ်ပါသည်။ Wifi (802.11) – b/g/n ဖြစ်ပြီး Secondary Gigabit Ethernet အတွက် အပေါက် တစ်ခု ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Outdoor+ (High Density) အတွက် Software ကို www.ubnt.com တွင် အခမဲ့ download ဆွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Outdoor 5G (Interference-free)
Outdoor 5G အမျိုးအစားတွင် frequency rate 2.4GHz မပါဘဲ 5GHz- 300Mbps ဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အကွာအဝေးသည် 183m(600ft) အထိ အသုံးပြုသူများ အသုံးပြုနိုင်ပြီး wifi (802.11) – a/n (2)မျိုး ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Outdoor 5G သည် Secondary Gigabit Ethernet အပေါက် ပါဝင်သောကြောင့် လုပ်ငန်းသုံး အတွက် အဆောက်အဦးအပြင်ပိုင်း အသုံးပြုချင်သည့် သူများအတွက် Ubiquiti Outdoor 5G အမျိုးအစားသည် အသင့်လျှော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ Outdoor 5G (Interference-free) အတွက် Software ကို www.ubnt.com တွင် အခမဲ့ download ဆွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
AC Outdoor (Interference-free Extra Speed)
Ubiquiti AC Outdoor ၏ speed မှာ frequency 2.4 GHz- 450 Mbps နှင့်5GHz- 1300 Mbps ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်နှုန်းမြင့် Dual band အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အကွာအဝေးအားဖြင့် 183m(600ft) အထိ အသုံးပြုသွားနိုင်ပြီး wifi (802.11)- a/b/g/b/ac (၅)မျိုး အသုံးပြုသွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Secondary Gigabit Ethernet အပေါက် ပါဝင်ပြီး outer design အဖြစ် စတုရန်းပုံဖြင့် ပါးလွှာစွာ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ Ceiling Type အမျိုးအစား နံရံကပ် ဖြစ်သည့်အတွက် အသုံးပြုမည့် သူများအနေဖြင့် တပ်ဆင်ရ လွယ်ကူစေကာ သပ်ရပ်လှပစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ Ubiquiti AC Outdoor အမျိုးအစားကို ကျယ်ဝန်းသော အဆောက်အဦးအပြင်ပိုင်း လုပ်ငန်းသုံး နေရာများတွင် တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ AC Outdoor (Interference-free Extra Speed) အတွက် Software ကို www.ubnt.com တွင် အခမဲ့ download ဆွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်သုံးသီးသန့် အကောင်းဆုံး Ubiquiti AirRouter ဖြစ်ပါသည်။ Frequency rate 2.4 GHz – 150 Mbps ရှိသည့်အတွက် အကွာအဝေး Length အားဖြင့် 100 m ကျော် အထိ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Wifi (802.11) အတွက် b/g/n သုံးမျိုးစလုံး အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး Secondary Gigabit Ethernet အတွက် 1 10/100 Ethernet ပါဝင်မည် ဖြစ်သည့်အတွက် အိမ်သုံးသီးသန့် အသုံးပြုမည့် သူများအတွက် အဆင်ပြေစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ Frontiir Company မှ ဖြန့်ချီသော Ubiquiti AirRouter သည် အိမ်သုံး သီးသန့် အသုံးပြုမည့် သူများ အများဆုံး အသုံးပြုသော အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ Air Router အတွက် Software ကို www.ubnt.com တွင် အခမဲ့ download ဆွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
AirRouter HP သည် Frequency rate 2.4 GHz - 150 Mbps ရှိပြီး Length အကွာအဝေး 200 ကျော် အထိ အသုံးပြုနိုင်သည့် Ubiquiti AirRouter HP ဖြစ်ပါသည်။ Wifi (802.11) – b/g/n ကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး Secondary Ethernet 1 10/ 100 ဖြစ်သည့်အတွက် အိမ်သုံးသီးသန့် အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည့် Ubiquiti AirRouter HP ဖြစ်ပါသည်။ Air Router HP အတွက် Software ကို www.ubnt.com တွင် အခမဲ့ download ဆွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
AirGateway အမျိုးအစားသည် လူသုံးများလာသော အိမ်သုံး သီးသန့် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ Frequency rate 2.4GHz - 150 Mbps Speed ဖြင့် သွားသည့် အတွက် အကွာအဝေး 200 ကျော် အထိ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Wifi (802.11) – b/g/n သုံးမျိုး ပါဝင်ပြီး Secondary Gigibit Ethernet အနေဖြင့် 1 10/100 Ethernet ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ Ubiquiti အမှတ်တံဆိပ် AirGateway အမျိုးအစားသည် အရွယ်အစား အလွန်သေးငယ်သည့်အတွက် နေရာမယူ တပ်ဆင်ရ လွယ်ကူစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ Air Gateway အတွက် Software ကို www.ubnt.com တွင် အခမဲ့ download ဆွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Ubiquiti Airmax Series မှ Model name - Rocket M အမျိုးအစားသည် Point to Point ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Frequency rate (4)မျိုး - 900MHz, 2.4 GHz,3GHz,5GHz တို့ ဖြင့် ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ Rocket M ၏ အသုံးပြုနိုင်သော အကွာအဝေး Range မှာ 50 km ကျော် ဖြစ်ပြီး Throughput – 150 Mbps အလုပ်လုပ်ပါသည်။ Rocket M အမျိုးအစားသည် antenna တပ်ဆင် အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်ထားသော Antenna အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ အသုံးပြုရ အဆင်ပြေစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
Rocket M Ti
Ubiquiti series ဖြစ်သည့် Rocket M Ti အမျိုးအစားသည် Titanium ကဲ့သို့ မာကြောကောင်းမွန်စေပြီး Frequency 2.4GHz နှင့် 5GHz နှစ်မျိုးဖြင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Rocket M Ti အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အကျယ်အ၀န်းမှာ 50 ကီလိုမီတာ ကျော် ဖြစ်ပြီး Throughput – 150 Mbps ကျော် ရှိပါသည်။ Rocket M Ti သည် Antnenna တွဲသုံးရမည့် အမျိူးအစားဖြစ်ပြီး Antenna အပေါ် အခြေခံကာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အတွက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Antenna ကို ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Ubiquiti အမှတ်တံဆိပ် Point to Point ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့် Bullet M ဖြစ်ပါသည်။ Bullet ဟု တင်စားထားသည့်အတွက် အသွင်အပြင်အရ ကျည်ဆန်တစ်ခုသဖွယ် သေးငယ်ပြီး မြန်နှုန်းမြင့် အလုပ်လုပ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ Frequency Rate – 2.4GHz နှင့် 5GHz တို့ ဖြစ်ပြီး အကွာအဝေး Range အားဖြင့် 50 km ကျော် အထိ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ 100 Mbps ကျော် Throughput ဖြင့် Antenna တပ်ဆင် အသုံးပြုပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Antenna ကို မိမိတို့ တပ်ဆင်မည့် အကွာအဝေးနှုန်းထားအတွက် ကျွမ်းကျင်သည့် Frontiir Networker များနှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Bullet M Ti
Point To Point ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်မည့် Bullet M Ti အမျိုးအစား၏ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်သည့် Frequency များကတော့ 2.4 GHz နှင့်5GHz တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အကွာအဝေး Range အားဖြင့် 50 km ကျော် ဖြစ်ပြီး Throughput – 100 Mbps ဖြစ်ပါသည်။ Bullet M Ti အမျိုးအစားသည် အသုံးပြုမည့် Antenna အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ အသုံးပြုရ ကွာခြားသွားစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
Power Bridge M
Power Bridge M အမျိုးအစားအတွက် Frequency (၃)မျိုးဖြစ်သည့်3GHz,5GHz, 10 GHz များကို ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အကွာအဝေး range အားဖြင့် 20 km ကျော် အထိ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး 150 Mbps ကျော် throughput ရှိပါသည်။
Antenna Gain များမှာ
Frequency -3 GHz အတွက် 20 dBi
Frequency -5 GHz အတွက် 24-26 dBi
Frequency -10 GHz အတွက် 33-34 dBi အဖြစ် series အလိုက် သုံးမျိုးခွဲထားပါသည်။
Nano Station Loco M
Frequency rate – 900 MHz, 2.4 GHz,5GHz ဖြင့် သုံးမျိုးသုံးစားခွဲခြားထားပြီး သုံးမျိုးလုံး၏ အကွာအဝေး Range မှာ 15 km ကျော် ဖြစ်ပါသည်။ Nano Station Loco M ၏ throughput မှာ 15 Mbps ကျော် ဖြစ်ပါသည်။ Antenna အတွက်လည်း သုံးမျိုးထပ်မံခွဲခြားထားပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို စိတ်တိုင်းကျ အသုံးပြုသွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Antenna Gain များအနေဖြင့်
Frequency - 900 MHz အတွက် 8 dBi
Frequency – 2.4 GHz အတွက် 8 dBi
Frequency -5 GHz အတွက် 19 dBi အဖြစ် series အလိုက် သုံးမျိုးခွဲထားပါသည်။
Nano Station M အမျိုးအစားသည် point to point ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်သည့် frequency rate (၃)မျိုး ရှိသော airmax ဖြစ်ပါသည်။ frequency rate များမှာ 2.4 GHz, 3GHz, 5GHz တို့ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော အကွာအဝေး Range များမှာ 15 km ကျော် ဖြစ်ပြီး Throughput 150Mbps ကျော် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ရရှိနိုင်သည့် Antenna Gain များမှာ 11 dBi, 13 dBi, 16 dBi တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Ubiquiti ၏ point to point ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်မည့် Nano bridge M ဖြစ်ပါသည်။ Nano bridge M ၏ frequency များမှာ 900 MHz ,2.4GHz, 3.6 GHz နှင့် 5GHz ဟူ၍ လေးမျိုး ရရှိနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော အကွာအဝေး Range မှာ 20km ကျော် ဖြစ်ပြီး 150Mbps ကျော် Throghput ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Antenna Gain အမျိုးအစား ငါးမျိုးအနေဖြင့် 11 dBi, 18 dBi, 12 dBi ,22 dBi နှင့် 25 dBi တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Nano Bean M
Nano Bean M အမျိုးအစားတွင် 2.4 GHz နှင့်5GHz နှစ်မျိုးဖြင့် Frequency ကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ဖမ်းယူနိုင်မည့် အကျယ်အ၀န်း range အားဖြင့် 25 ကီလိုမီတာ ကျော်အထိ ဖမ်းယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Throughput အားဖြင့် 18 dBi, 16 dBi, 19 dBi, 22 dBi နှင့် 25 dBi တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Air Grid M
Ubiquiti ၏ Air Grid M အမျိုးအစားသည် Point to Point ချိတ်ဆက် အသုံးပြုရန်အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ Air Grid M ၏ Frequency rate မှာ5GHz ရှိပြီး အကွာအဝေး Range မှာ 30 km ကျော်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Throughput – 100 Mbps ဖြစ်ပြီး 16 dBi , 20 dBi, 23 dBi နှင့် 27 dBi ဟူ၍ လေးမျိုးရှိသည့်အတွက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Pico Station M အမျိုးအစားသည် frequency rate-2.4 GHz ရှိသည့် point to point ချိတ်ဆက်ရမည့် Airmax ဖြစ်ပါသည်။
Range အနေဖြင့် indoor အတွက် 200M , outdoor အတွက် 500M အထိ နှစ်မျိုး အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Throughput – 100 Mbps ကျော် ဖြစ်ပြီး Antenna Gain – 5dBi ရှိပါသည်။
Ubiquiti Airmax များကို Point To Point ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် connection အား ထောက်ပံ့ပေးမည့် Antenna များဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Antenna များကို Model နံပါတ်အလိုက် ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သကဲ့သို့ Model အရ Antenna Gain နှင့် Frequency Range ပါ ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Model နံပါတ် Omni: AMO-2G10 အတွက် Antenna gain-10 နှင့် Frequency range (2.3-2.7 GHz)
Model နံပါတ် Omni: AMO-5G10 အတွက် Antenna gain-10 နှင့် Frequency range (5.1-5.8 GHz)
Model နံပါတ် Omni: AMO-2G13 အတွက် Antenna gain-13 နှင့် Frequency range (2.3-2.7 GHz)
Model နံပါတ် Omni: AMO-5G13 အတွက် Antenna gain-13 နှင့် Frequency range (5.1-5.8 GHz)
Model နံပါတ် Omni: AMO-3G12 အတွက် Antenna gain-12 နှင့် Frequency range (3.3-3.8 GHz) ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
Antenna အားလုံး၏ Direction လမ်းကြောင်းမှာ Omni ဖြစ်ပါသည်။
Airmax antenna အမျိုးအစားတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ Airmax Antenna ၏ model အလိုက် direction,antenna gain နှင့် frequency rate များ ကွာခြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Sector: 5G-20-90 အတွက် 90ံSector , Antenna gain 20 dB နှင့် Frequency rate 5.1-5.8 GHz တို့ ဖြစ်ပါသည်။ Sector: 5G-19-120 အတွက် 120ံSector , Antenna gain 19 dB နှင့် Frequency rate 5.1-5.8 GHz တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Sector: 5G-17-90 အတွက် ဆိုရင် 90ံSector , Antenna gain 17 dB နှင့် Frequency rate 5.1-5.8 GHz တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Sector: 5G-16-120 အတွက် ဆိုရင် 120ံSector , Antenna gain 16 dB နှင့် Frequency rate 5.1-5.8 GHz တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Sector: 2G-16-90 အတွက် ဆိုရင် 90ံSector , Antenna gain 16 dB နှင့် Frequency rate 2.3-2.7 GHz တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Sector: 2G-15-120 အတွက် ဆိုရင် 120ံSector , Antenna gain 15 dB နှင့် Frequency rate 2.3-2.7 GHz တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Model No. Ti Sector: AM-V2G-Ti ၏ သွားမည့် လမ်းကြောင်းမှာ 60ံ-120ံsector အရ ဖြစ်ပြီး Antenna Gain 17-15 dBi ရှိပါသည်။ Frequency Rate 2.3-2.7 GHz ဖြစ်ပါသည်။
Model No. Ti Sector: AM-V5G-Ti ၏ သွားမည့် လမ်းကြောင်းမှာ 60ံ-120ံsector အရ ဖြစ်ပြီး Antenna Gain 21-19 dBi ရှိပါသည်။ Frequency Rate 5.1-5.8 GHz ဖြစ်ပါသည်။
Rocket Dish Antenna စီးရီး တွင် Model No. (၄) မျိုးရှိပါသည်။
Rocket Dish: RD-2G-24 ၏ သွားမည့် လမ်းကြောင်းမှာ direction မှာ6ံBeam ဖြစ်ပြီး Antenna Gain – 24 dBi , Frequency Rate – 2.3-2.7 GHz ရှိပါသည်။
Rocket Dish: RD-2G-24 ၏ သွားမည့် လမ်းကြောင်းမှာ direction မှာ7ံBeam ဖြစ်ပြီး Antenna Gain – 26 dBi , Frequency Rate – 3.3-3.8 GHz ရှိပါသည်။
Rocket Dish: RD-2G-24 ၏ သွားမည့် လမ်းကြောင်းမှာ direction မှာ5ံBeam ဖြစ်ပြီး Antenna Gain – 30 dBi , Frequency Rate – 5.1-5.8 GHz ရှိပါသည်။
Rocket Dish: RD-2G-24 ၏ သွားမည့် လမ်းကြောင်းမှာ direction မှာ3ံBeam ဖြစ်ပြီး Antenna Gain – 34 dBi , Frequency Rate –5.1-5.8 GHz ရှိပါသည်။
Ubiquiti Switch အမျိုးအစားဖြစ်သည့် ToughSwitch PoE ခလုတ်နှစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
ToughSwitch PoE အမျိုးအစားမှာ port (၅)ပေါက် ပါရှိပြီး Gigabit port (၅)ပေါက် ပါရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ PoE Port အပေါက် ကတော့ 24 V အတွက်သာ (၅)ပေါက် ပါရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
ToughSwitch PoE Pro အမျိုးအစားမှာ port (၈)ပေါက် ပါရှိပြီး Gigabit port (၈)ပေါက် ပါရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ PoE port အပေါက်ကတော့ 24/28 V အတွက် (၅) ပေါက် ပါရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
Ubiquiti ToughSwitch ၏ အကောင်းဆုံးအားသာချက်ကတော့ VLAN ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး Adapter-free PoE ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
Ubiquiti အမျိုးအစား EdgeRouter Lite သည် လိုင်း(၂)လိုင်း အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် တပ်ဆင်၍ ရရှိနိုင်အောင် ချိတ်ဆက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ Ports (၃) ပေါက် ပါဝင်မည် ဖြစ်ပြီး Gigabit ports အတွက်လည်း (၃)ပေါက် ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ PoE Port အတွက်တော့ ပါဝင်ခြင်း မရှိပါ။
EdgeRouter PoE သည် လိုင်းနှစ်လိုင်း အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး ချိတ်ဆက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး Port ငါးခု ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Gigabit port လည်း ငါးခု ပါဝင်ကာ PoE Ports – 24/48 V ငါးခု အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Ubiquiti အမျိုးအစား ၀ါယာကြိုးဖြစ်သည့် Tough Cables Pro ဖြစ်ပါသည်။ Category 5E ဖြင့် ညီမျှမည် ဖြစ်ပါသည်။ Outdooor-ready အတွက် ကြာရှည်ခံစွာ အသုံးပြုသွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ One pack အတွက် အလျားပေ ပျမ်းမျှ (၁၀၀၀) ပေ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Ubiquiti အမျိုးအစား ၀ါယာကြိုးဖြစ်သည့် Tough Cables Carrier ဖြစ်ပါသည်။ Category 5E ဖြင့် ညီမျှမည် ဖြစ်ပါသည်။ Extreme-Outdooor အတွက် ကြာရှည်ခံစွာ အသုံးပြုသွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ One pack အတွက် အလျားပေ ပျမ်းမျှ (၁၀၀၀) ပေ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Elimates Ethernet ESD falitures
အပေါ်ယံ အဖုံးအားဖြင့် သတ္တုကို အသုံးပြုပေးထားပါသည်။
မော်ဒယ် ES-24-250W အတွက် Gigabit ပေါက် အရေအတွက် ( 24 ) ပေါက် ပါဝင်ပြီး SFP ပေါက် (2) ပေါက် ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင် သုံးစွဲမှု ဖြစ်သည့် Maximum Power Consumption (W) – 250 ဖြစ်ပြီး Throughput အတွက် 26 Gbps ဖြစ်ပါသည်။ မော်ဒယ် ES-24-250W အတွက် SFP + အပေါက် ပါဝင်ခြင်း မရှိဘဲ ဗို့အား(voltage) အားဖြင့် 20-27 V ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
မော်ဒယ် ES-24-500W အတွက် SFP အပေါက် (2) ပေါက် ပါဝင်ကာ Gigabit အပေါက် အရေအတွက် ( 24 ) ပေါက် ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Throughput – 26 Gbps ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင် သုံးစွဲမှု အားဖြင့် 500 W ဖြင့်အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မော်ဒယ် ES-24-500W အတွက် SFP + အပေါက် ပါဝင်ခြင်း မရှိဘဲ ဗို့အား(voltage) အားဖြင့် 20-27 V ဖြစ်ပါသည်။
မော်ဒယ် ES-48-500W အတွက် SFP အပေါက် (2) ပေါက် ပါဝင်ကာ Gigabit အပေါက် အရေအတွက် ( 48 ) ပေါက် ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Throughput – 70 Gbps ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင် သုံးစွဲမှု အားဖြင့် 500 W ဖြင့် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မော်ဒယ် ES-24-500W အတွက် SFP + အပေါက် (2) ပေါက် ပါဝင်ပြီး ဗို့အား(voltage) အားဖြင့် 20-27 V ဖြစ်ပါသည်။
မော်ဒယ် ES-48-750W အတွက် SFP အပေါက် (2) ပေါက် ပါဝင်ကာ Gigabit အပေါက် အရေအတွက် ( 48 ) ပေါက် ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင် သုံးစွဲမှု အားဖြင့် 750 W ဖြင့် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ပြီး Throughput – 70 Gbps ဖြစ်ပါသည်။ မော်ဒယ် ES-24-500W အတွက် SFP + အပေါက် (2) ပေါက် ပါဝင်ပြီး ဗို့အား(voltage) အားဖြင့် 20-27 V ဖြစ်ပါသည်။
UniFi Video Camera IR
UniFi Video Camera IR သည် resolution 720 pHD ပါဝင်ပြီး Frame Rate အမြင့်ဆုံး (30) FPS ပါဝင်သော ကင်မရာ ဖြစ်ပါသည်။0to -30 to 50ံC(-22 to 122ံF) အပူချိန်ရှိသော နေရာများတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး Sensor အတွက် Progressive Scan RGB 1/4” CMOS Image Sensor ဖြင့် ပုံရိပ်ဖမ်းယူအား ကောင်းမွန်စွာဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 24V, 0.5A PoE Adapter ပါဝင်ပြီး မှန်ဘီလူး အတွက် 3.6 mm/F 1.8ကို အသုံးပြုနိုင်သည့် အတွက် ပုံရိပ်များကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Built-in Micrephone ပါဝင်ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အသံကိုပါ ဖမ်းယူနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး Processor-ARM 1136J-S, 528MHz ဖြစ်ပါသည်။ နံရံများနှင့် Ceiling များတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Pole Mount အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Memory အတွက် 256MB DDR3 ပါဝင်ပြီး ကင်မရာကို 56.14ံ(H), 36.86ံ(V)နှင့် 64.33ံ(D) တို့ကို လှည့်ပတ် ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
UniFi Video Camera Dome IR
UniFi Video Camera Dome IR သည် resolution 720 pHD ဖြစ်ပြီး Frame Rate အမြင့်ဆုံး (30) FPS ပါဝင်သော ကင်မရာ ဖြစ်ပါသည်။0to 40ံC(32 to 104ံF) အပူချိန်ရှိသော နေရာများတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး Sensor အတွက် 1/4” CMPS Image Sensor ဖြင့် ပုံရိပ်ဖမ်းယူအား ကောင်းမွန်စွာဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 24V, 0.5A PoE Adapter ပါဝင်ပြီး မှန်ဘီလူး အတွက် 1.96 mm/F 2.0ကို အသုံးပြုနိုင်သည့် အတွက် ပုံရိပ်များကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Built-in Micrephone ပါဝင်ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အသံကိုပါ ဖမ်းယူနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး Processor-ARM 1136J-S, 528MHz ဖြစ်ပါသည်။ Wide-Angel Lens ပါဝင်သည့် အတွက် ပုံမှန်ကင်မရာ၏ မြင်ကွင်းထက် ပိုမိုကျယ်ဝန်းသည့် မြင်ကွင်းဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Memory အတွက် 256MB DDR3 ပါဝင်ပြီး ကင်မရာကို 88.8ံ(H), 63.0ံ(V)နှင့် 98.2ံ(D) တို့ကို လှည့်ပတ် ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
UniFi Video Camera Pro သည် resolution 1080 p Full HD ဖြစ်သည့်အတွက် ကြည်လင် ပြတ်သားသော ဗွီဒီယိုများကို ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Frame Rate အမြင့်ဆုံး (30) FPS ပါဝင်ကာ -40 to 50ံC(-40 to 122 F) အပူချိန်ရှိသော အခန်းအတွင်းအပြင်နေရာများတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး Sensor အတွက် 1/3” Wide Dynamic Range (WDR) Sensor ဖြင့် ပုံရိပ်ဖမ်းယူအား အထူးကောင်းမွန်စွာဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 48V, 0.5A PoE Adapter ပါဝင်ပြီး မှန်ဘီလူး အတွက် 3×Optical Zoom, F=3.9mm ကို အသုံးပြုနိုင်သည့် အတွက် ပုံရိပ်များကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ နံရံများနှင့် Ceiling များတွင် Pole Mount ဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး Processor မှာ ARM 1136J-S, 528MHz ဖြစ်ပါသည်။ Memory အတွက် 256MB DDR3, 256 MB Flash ပါဝင်ပြီး ကင်မရာကို 44.4 W- 15.7 T (V), 81.0 W- 27.9T (H), 94.0W- 32.1T (D) တို့ကို လှည့်ပတ် ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။